संसारकै दोस्रो बढी पोषणयुक्त तरकारी – रायोको साग ! | सुदुरपश्चिम खबर
संसारकै दोस्रो बढी पोषणयुक्त तरकारी – रायोको साग !
रायोको साग भनेपछि कतिपयले नाक खुम्च्याउने गर्छन् । तर, यो संसारकै दोस्रो बढी पोषणयुक्त तरकारीमा पर्छ । रायोको सागलाई पकाएर, काँचै सलादको रुपमा र सिजिनिङ गरेर पनि खान सकिन्छ । तर, यसलाई धेरै पकाउनु भने हुँदैन । बढि पकाउँदा यसको पोषणतत्व हटेर जाने सम्भावना हुन्छ फाइदै फाइदा रायोको साग गर्भवती महिलाका लागि निकै ला’भदायक हुन्छ ।
यसमा प्रचुर भिटामिनको मात्रा हुने भएकाले वाकवाक आउने, बान्ता हुने र टाउको दुख्नेजस्ता समस्याबाट बचाउँछ । निमोनिया, फोक्सोको इन्फेक्सन, रुघाखोकी लाग्ने मानिसले पनि रायोको साग सेवन गर्दा राहत मिल्छ ।
यसबाट प्राप्त हुने ‘भिटामिन सी’ ले यस्ता खालका दिर्घ रोगिलाई औषधीकै काम गर्छ । बाथको रोगीलाई पनि रायोको सागले राहत प्रदान गर्छ । यसमा हुने कपरले शरिरको दुखाइलाई कम गर्छ ।
पिसाब नलिको पत्थरीबाट पनि रायोको सागले बचाउने काम गर्छ । रायोको सागले डन्डीफोर, छालासम्बन्धि विभिन्न इन्फेसनबाट बचाउँछ । रायोको सागमा पाइने ‘भिटामिन के’ लेप्रोस्ट्रेट, कोलोन, पेट, नाक र मुख क्यान्सरको जखिमलाई कम गर्छ । यसले कलेजो क्यान्सरका विरामीलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ ।
मुटुसम्बन्धी समस्या छ भने पनि रायोको साग खान नछुटाउँदा राम्रो हुन्छ । यो सागले मुटुको विरामीलाई राहत प्रदान गर्छ । यसले शरीरका विकार पदार्थलाई निस्कासन गर्नका लागि समेत सहयोग पुर्याउँछ । त्यति मात्र होइन यसले स्मरणशक्ति बढाउनमा पनि भूमिका खेल्छ ।
रायोको सागमा ‘भि’टामिन ए’ को मात्रा प्रशस्त हुन भएकाले आँखालाई स्वस्थ राख्नका लागि सहयोग पुर्याउँछ । आँखाको लागि ‘भिटामिन ए’ अप’रिहार्य तत्व हो । यसले रत’न्धोलगायत आँ’खामा हुने समस्याको सम्भावनालाई पनि दुर गर्ने काम गर्छ । रा’योको सा’गमा ‘भि’टामिन(के’ प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ ।
यसले हाडलाई आवश्यक पर्ने ख’निज प्रदान गर्छ । त्यति मात्र नभएर रगत जम्ने र अनावश्यक ठाउँमा क्या’ल्सियम जम्मा हुने सम’स्यालाई पनि रोक्ने गर्छ । हड्डी खिइने समस्या छ भने पनि रा’योको साग अमृत सावित हुन सक्छ
। पाइन्छ अनेक भिटामिन रायोको सागमा भिटामिन के, ए, सि, इ, बि वन, बी टु, बि थ्री, प्रोटिन, म्याग्नेसियम, आइरन, फस्फोरस, प्यान्टोथेनिक एसिड, फाइबर, फोलेटलगायतका पोषण तत्व हुने गर्छ । जसले शरिरलाई पूर्ण रुपमा स्वा’स्थ राख्नका लागि मद्दत पुर्याउँछ । ( urlabarinews.com बाट साभार )